အကုနျအကနြညျးပွီး ကိုယျတိုငျလုပျနိုငျတဲ့ ဆနျနဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျနညျး (သို့) မကျြနှာလိမျးတဲ့ cream လုပျနညျး – Daily Feed MM
Admin_John | October 27, 2020 | Knowledge | No Comments
သငျသိပါသလား? ဆနျပွုတျဆိုတာ စားဖို့ပဲမဟုတျဘူး စကှငျးကဲလို့လညျး ရတယျဆိုတာ…ဒီတဈပါတျရဲ့ topic ကတော့ “ဆနျနဲ့ မကျြနှာပေါငျးတငျနညျး (သို့) မကျြနှာလိမျးတဲ့ cream လုပျနညျး”ပါရှငျ့…စိတျဝငျစားစရာ အိမျတှငျးနညျးလမျးလေးမို့ Irene
ကိုယျတိုငျလညျး လုပျကွညျ့ရငျး အဆငျပွတောကွောငျ့ အခုလို ပွနျလညျ sharing လုပျပေးရခွငျးဖွဈပါတယျဆနျကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး အသားအရအေတှကျ အငျမတနျအာနိသငျရှိတဲ့ သဘာဝထှကျကုနျတဈခုပါပဲ… !
အဓိကအားဖွငျ့…မကျြနှာတငျးရငျးစခွေငျး၊နုပြိုစခွေငျး၊အရေးအကွောငျးမြား ပြောကျကငျးစခွေငျး၊အသားအရကေို ပွနျလညျကနျြးမာစခွေငျး၊အရဓောတျဖွညျ့ပေးခွငျး၊နလေောငျအကှကျမြား၊ အမဲစကျမြား ကို ပြောကျကငျးစနေိုငျခွငျး စသညျ့ ဂုဏျသတ်တိမြားစှာ ပါဝငျပါ
တယျပွုလုပျပုံလေးကို ကွညျ့လိုကျရအောငျနျောဆနျ လကျတဈဆုပျစာကို ရဖွေငျ့ ၁ နာရီခနျ့စိမျထားပါ (ဘကျတီးရီးယားနှငျ့ ဖုနျမှုနျ့မြား ထှကျသှားစရေနျ ရညျရှယျပါတယျ)ဆေးပွီးသောဆနျကို ရသေနျ့ဖွငျ့ ဆနျပွုတျအနအေထားဖွဈသညျအထိ (ပြော့လာသညျ
အထိ) ပွုတျပါပြော့ပွဲလာသောဆနျပွုတျကို ယူပွီး ဇကာထဲထညျ့ကာ အပျေါမှ ဇှနျးဖွငျ့ ဖိညှဈပေးပါ (အောကျက ခှကျတဈခုခုဖွငျ့ ခံထားပါ)စဈထုတျပွီးပါက cream ကဲ့သို့ အဖွူရောငျ အ ညျပဈြပဈြလေး ရလာမှာဖွဈပါတယျVatamin E ၁ လုံး ဖောကျထညျ့ပါ
Vitamin E နှငျ့ Aloe Gel က မထညျ့မဖွဈမဟုတျတဲ့အတှကျ ဘာမှမရောထားတဲ့ rice cream တဈမြိုးတညျး လိမျးလို့လညျး ရပါတယျ… Irene ကတော့ ကွိုကျလို့ထညျ့ပွထားတာပါ… ထညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေညျး ထညျ့လို့ရအောငျလို့လေ
ကဲ…. ဒီတဈပတျနညျးလမျးလေးကိုလညျး အားလုံးနှဈသကျသဘောကမြယျလို့ Irene မြှျောလငျ့ပါတယျ
ခဈြသော Irene Pretty
သင်သိပါသလား? ဆန်ပြုတ်ဆိုတာ စားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူး စကွင်းကဲလို့လည်း ရတယ်ဆိုတာ…ဒီတစ်ပါတ်ရဲ့ topic ကတော့ “ဆန်နဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်း (သို့) မျက်နှာလိမ်းတဲ့ cream လုပ်နည်း”ပါရှင့်…စိတ်ဝင်စားစရာ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးမို့ Irene
ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ကြည့်ရင်း အဆင်ပြေတာကြောင့် အခုလို ပြန်လည် sharing လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆန်ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း အသားအရေအတွက် အင်မတန်အာနိသင်ရှိတဲ့ သဘာဝထွက်ကုန်တစ်ခုပါပဲ… !
အဓိကအားဖြင့်…မျက်နှာတင်းရင်းစေခြင်း၊နုပျိုစေခြင်း၊အရေးအကြောင်းများ ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊အသားအရေကို ပြန်လည်ကျန်းမာစေခြင်း၊အရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း၊နေလောင်အကွက်များ၊ အမဲစက်များ ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ခြင်း စသည့် ဂုဏ်သတ္တိများစွာ ပါဝင်ပါ
တယ်ပြုလုပ်ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဆန် လက်တစ်ဆုပ်စာကို ရေဖြင့် ၁ နာရီခန့်စိမ်ထားပါ (ဘက်တီးရီးယားနှင့် ဖုန်မှုန့်များ ထွက်သွားစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်)ဆေးပြီးသောဆန်ကို ရေသန့်ဖြင့် ဆန်ပြုတ်အနေအထားဖြစ်သည်အထိ (ပျော့လာသည်
အထိ) ပြုတ်ပါပျော့ပြဲလာသောဆန်ပြုတ်ကို ယူပြီး ဇကာထဲထည့်ကာ အပေါ်မှ ဇွန်းဖြင့် ဖိညှစ်ပေးပါ (အောက်က ခွက်တစ်ခုခုဖြင့် ခံထားပါ)စစ်ထုတ်ပြီးပါက cream ကဲ့သို့ အဖြူရောင် အ ည်ပျစ်ပျစ်လေး ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်Vatamin E ၁ လုံး ဖောက်ထည့်ပါ
Vitamin E နှင့် Aloe Gel က မထည့်မဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာမှမရောထားတဲ့ rice cream တစ်မျိုးတည်း လိမ်းလို့လည်း ရပါတယ်… Irene ကတော့ ကြိုက်လို့ထည့်ပြထားတာပါ… ထည့်ချင်တဲ့သူတွေလည်း ထည့်လို့ရအောင်လို့လေ
ကဲ…. ဒီတစ်ပတ်နည်းလမ်းလေးကိုလည်း အားလုံးနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ Irene မျှော်လင့်ပါတယ်
ချစ်သော Irene Pretty
ခံစားနရေတဲ့ ဝဒေနာတှကေို ကုသပေးမယျ့ ရနှေေးကုထုံး
ဒေါကျတာ ကြျောကြျောစိုငျး ပွောပွတဲ့ မွနျမာပွညျရဲ့ အမှနျတရားမြား